Tag: fandefasan-kafatra fampiharana finday | Martech Zone
Tag: fandefasan-kafatra finday
Ny fampivelarana sy ny fametrahana ny rindranasa finday dia mety ho dingana mandreraka, mandany loharano ary mahasosotra an'ireo orinasa. Ny fahazoana fankatoavana avy amin'ny App Store indraindray dia mety ho fanamaivanana, tsy maninona izay manatsara ny fampiharana findainao. Ary raha hitanao fa misy ny fotoana ahafahana manatsara na mampiavaka ny fampiharana dia midika fampivoarana fanampiny sy famotsorana vaovao izany. Misy kosa ny solony. Leanplum dia vahaolana fanatsarana tanteraka ho an'ny fampiharana finday hanampy